Xog: Maxey isku qabteen R/W Rooble iyo Wasiir Beyle? | dalkaan.com-Wararka ugu danbeeyay ee soomaaliya
Home Warkii Xog: Maxey isku qabteen R/W Rooble iyo Wasiir Beyle?
Muqdisho (Dalkaan.com) – Wasiirka Maaliyadda ee Dowladda Federaalka Soomaaliya Cabdiraxmaan Beyle Ducaale ayaa waayey Kursigiisii Golaha Shacabka kadib khilaaf la sheegay inuu muddooyinkii lasoo dhaafay u dhaxeeyey isaga iyo Ra’isul waaare Maxamed Xuseen Rooble.
Beyle ayaa ku fadhiyey Kusiga HOPP# 201, waxaana kursigiisii maanta qaatay Dr. Cabdi Abiib oo ah aas-aasaha Machadka RAAS.
Dr. Abiib oo la fahsamsan yahay inuu si weyn gacan saar shakhsi ah ula leeyahay taliyihii hore ee NISA Fahad Yaasiin Xaaji Daahir ayaa dhinaca kale macaamiil dhow la leh xubno kamid ah midowga musharixiinta mucaaradka, waana cod uu odoraskiisu adkaan doono.
Wasiir Beyle oo kamid ahaa labada Wasiir ee aan la badalin intii uu jiray nidaamka Madaxweyne Farmaajo ayaa maanta wuxuu qabtay shir jaraa’id oo uu kaga hadlay arrinta kursigiisa, isagoo si dadban u weeraray Ra’isul wasaaraha iyo xafiiskiisa.
Wasiirka Maaliyadda wuxuu sheegay inuu diiday waxyaabo badan oo aan waafaqsaneyn shuruucda Maaliyadda dalka oo loola yimid, taas oo uu ku muteystay cadaawad badan, balse wuxuu yiri hal Qof, 10 Qof iyo 100 qofba waxaa ka muhiimsan Qaranka.
Cabdiraxmaan Ducaale Beyle wuxuu sheegay in kursigiisa Golaha Shacabka iyo go’aanadiisa maasaaniyaddu inay isisaameeyeen, balse uu ku adkeysanayo go’aankiisa maaliyadeed.
Inkastoo waqtiga uu doodiisa banaanka keenay ay daciif ka dhigeyso eedaan uu sida maldahan ugu jeedinayo Ra’isul Wasaare Rooble iyo kooxdiisa, hadana xubno kamid ah golaha wasiirada ee dowladda federaalka waxay sheegeen in muddooyinkii lasoo dhaafay uusan jirin cilaaqaad wanaagsan oo ka dhaxeeya Ra’isul Wasaare Rooble iyo Wasiirka Maaliyadda Cabdiraxmaan Beyle.
Sababta aan xilka looga qaadin iyadoo aysan labada Nin isku fiicneyn waxay wasiirada qaar ku sheegeen inay tahay culeys ka imaanayey dhanka Bankiga Adduunka iyo hey’adda Lacagta Adduunka ee IMF, kuwaas oo shaqo toos ah oo Beyle dhextaal u yahay la waday Wasaaradda Maaliyadda ee Soomaaliya.
Dhowr jeer oo hore oo la isku dayey in Beyle la bixiyo waxaa la sheegay inuu ku badbaaday cadaadiska hey’adaas oo madaxda sare ee dalka ku cadaadiyey inaan la dhaawicin mashruuca deyn-cafinta Soomaaliya iyo hufnaanta Maaliyadda oo u muuqata inay hey’adahaas hadda ku qanacsan yihiin.
Sidoo kale, la taliyayaasha Ra’isul Wasaare Rooble qaar, waxay sheegayaan haddii Beyle la tuuro in loo fahmi karo in Ra’isul wasaaruhu u bareeray arrin dhaqaale raadin oo la xiriirta, iyadoo dhawaanahaan ay ku socdeen eedo, kuwaas shabaha.
Maadaama uu maanta Beyle si dadban u weeraray xafiiska Ra’isul wasaaraha uuna isku xiray damac maaliyadeed iyo xildhibanimadii uu waayey waxaan la ogeyn waxa ay sameyn doonaan Ra’isul Wasaare Rooble iyo kooxdiisa.
Falanqeeyaasha qaar waxay qabaan inay dhici karto in Rooble lagu qalqaaliyo inuu dhagaha ka fureysto IMF iyo World Bank oo uu Beyle eryo, balse haddii ay tallaabadaas qaadaana lama yaqaano in loo fahmi doono khilaaf siyaasadeed ama qorshe Maaliyadeed.
Xubnaha ku dhow dhow Ra’isul Wasaare Maxamed Xuseen Rooble waa iska fogeeyeen eedda ka timid dhanka Wasiir Beyle, waxay sheegayaan inuu wasiir Cabdiraxmaan Beyle rabay in loo xiro kursigiisa Golaha Shacabka, iyaguna ay taas diideen, halkaasna uu ka xanaaqay.
Kursigaan waa la doortay maanta, waxaana qaatay Dr. Abiib, codkiisa meesha uu dhigi doono lama yaqaano, balse waa Nin saaxiibo badan oo labada dhinacba cilaaqaad dhow la leh.
Doorashada Soomaaliya ayaa ka gudubtay xadkii qiyaasta doorasho caadi ah, si xoog leh ayaa la isku dardarayaa, iyadoo aysan jirin cid loo joojinayo cabashadooda.
Maamul Goboleedyada ayaa u badan kuwa boobaya kuraasta, mana jiro xafiis awood u leh inuu arrintaaasi joojiyo.
Shacabka Soomaaliyeed iyo Beesha Caalamkaba waxaa ka muuqda daal badan, waxayna hamuun u qabaan, in mar un uu dhammaado mashruuca doorashada oo uu dalku ka baxo jahwareerka taagan, ayna dib u bilowdaan adeegyadii dowliga ahaa.
Facebook Twitter Pinterest WhatsApp Linkedin Email Print Viber Baydhabo (Caasimada Online) – Madaxweynaha maamulka Koonfur Galbeed, Mudane Cabdicasiis Xasan Maxamed (Lafta Gareen) ayaa maanta sameeyey xilka qaadis iyo magacaaabis, kadib wareegto goordhow...
Hay’adda HRW oo warbixin cusub kasoo saartay xasuuqii GOLOLEY
Burnley 0-1 Liverpool: Fabinho oo Reds ka caawiyay guul muhiim ah
Barcelona oo doonaysa in ay Arsenal u soo bandhigto Depay, iyo...
Deg Deg Cabsi soo wajahday Dadkii Tacadiyada Geystay Xiligii Farmaajo, 02/06/2022
Michael Owen: “Virgil van Dijk waa Daafaca khadka dhexe ee ugu...